Pogba ‘markasta waxa uu u dagaalami doonaa Man Utd’ | Somsoon
Home CAYAARAHA Pogba ‘markasta waxa uu u dagaalami doonaa Man Utd’
Paul Pogba ayaa sheegaya “in wax walba ay caadi u yihiin” isaga iyo Manchester United, waxa uuna ku adkaysanayaa in “1,000% uu ka qeybqaadanayo howsha kooxda”.
Wakiilka ciyaaryahanka 27 jirka ah ee khadka dhexe uga dheela xulka Faransiiska, Mino Raiola, ayaa todobaadkii tegay sheegay in ciyaaryahanka “uusan ku faraxsanayn” naadiga ayna tahay “in koox kale uu u wareego”.
Pogba ayaa ciyaaray dhammaan 90-kii daqiiqadood ee ciyaartii ay Sabtidii kooxdiisa barbaraha garoonka Old Trafford kula gashay kooxda Manchester City – iyadoo ciyaartaasna ay u aheyd middii lixaad ee horyaalka Ingiriiska ah ee ciyaarta lagu soo bilaabo xilli ciyaareedkan.
“Marwalba waan dedaalaa marwalba waan u dedaali doonaa Manchester United, saaxiibada aan kooxda ka wada tirsannahay iyo taageerayaashuba,” ayuu Pogba ku soo qoray bartiisa uu ku leeyahay Instagram-ka.
Article horeHooyo afar carruur ah oo ay dhashay ku gubtay duleedka magaalada Burco
Article socoda Dowladda Nigeria oo war ka soo saartay boqolaal arday oo u afduuban Booko-Haram
Maxaa looga hadlay kulankii maamulka Premier League-ga iyo kan kooxaha?
Tayo nuucee ah ayuu u baayahay wariyaha wanaagsan?
Maraykanka oo sheegay in Khatar ugu imaan karto dalal ay ka...